IChina i-Metal Mesh fekt kunye nabaxhasi | Dongjie
Ukuhonjiswa kweMetal yeMesh
I-Metal eyandisiweyo yeMeshini yeMesh
Ubumbeko Metal Mesh
Ukuhombisa kwiWesile Mesh
Chink Ikhonkco Mesh
Anti-inkungu kunye neHaze Window Gauze
Inkcazo ephezulu ye Window Gauze
Isikhuselo se Window yeMesh
Iimveliso ezinzulu zokuStamp
Inxalenye yeFiltha yeCarbon esebenzayo
Ikhusi lewindows ye-Anti-Haze
1.I-mesh yentsimbi eyongeziweyo yintsimbi eshicilelwe ngomatshini okanye ngepayiphu ukwenza ipatheni yemingxunya, islots, okanye imilo yokuhombisa.Imitya esetyenziselwa ukwenza amashiti enziwe ngentsimbi ibandakanya intsimbi engenasici, intsimbi eqengqelekayo, intsimbi eyomeleleyo, ialuminium, ubhedu, ubhedu, titanium, kunye nezinye izinto ezininzi.
Zininzi iindidi zemingxunya yentsimbi etyhidiweyo, njengengqukuva yomngxunya, umngxunya osisikwere, umngxunya wesikwere, umngxunya we hexagonal, umngxunya onxantathu, umngxunya we-slop hole, umngxunya womnqamlezo, kunye neminye imingxunya emininzi yokuhombisa.
3. Iphepha lesinyithi elinyanzelisiweyo liza ngohlobo olungenasiphelo, ubukhulu, iisheyithi, iimilo zomngxunya kunye neentlobo zezinto. Ukusuka kwizinto zokuhombisa ezingasasebenziyo ukuya kwizinto ezithwala umthwalo, isinyithi esihanjisiweyo sinika amathuba awodwa wokudibanisa amandla, ukusebenza kunye nobuhle. I-mesh yensimbi enyanzelisiweyo inezibonelelo ezininzi ezifana nokuhle, ukudityaniswa okuhle, imingxunya esasazwe ngokulinganayo, indawo egudileyo, ukusebenziseka lula, njalo njalo. Intsimbi enyanzeliswayo izisa amandla kunye nesitayile kwiindawo ezifihliweyo, izahlulelo, iipaneli zophawu, oonogada, izikrini, kunye nolunye ulwakhiwo.
Sinokuvelisa i-mesh yensimbi efezekileyo kuluhlu olubanzi lweemilo zembobo, ubungakanani, kunye neentlobo zezinto. Oku kwenza ukuba i-iron eyenziwe ngefreyithithi ilungele iinkqubo ezininzi.
I-mesh yensimbi enyanzeliswayo inokusetyenziswa kwiinkalo ezininzi zezinto zokwakha, kubandakanywa ubungqina bomoya bokulwa nothuli, izithintelo zengxolo, ukugqalwa kwe-facade, kufakwa kwisakhiwo sokwakha, indlela yokuhamba ehamba kunye nezitepsi, njl njl.
I-mesh yensimbi enyanzelisiweyo nayo inokusetyenziswa njengeebhalconies, iitafile zokhuselo lwendalo kunye nezitulo, isixhobo sezixhobo somatshini, i-grill yesithethi, i-sieves, izixhobo zasekhitshini, iishelu ezitolo ezinkulu, indawo yokubonisa umthendeleko, iqonga lokungenisa umoya okhupha umoya, njl.
Intsimbi enyanzeliswayo iguquguquka ngeendlela ezahlukeneyo kwaye isebenza ngokwayo kwizicelo ezahlukeneyo ezifana neephaneli zokuphalaza i-balustrade, iipaneli zokuhamba zendlela, izikhuselo zokhuseleko, ii-louvres kunye ne-ventilation, kunye ne-grilles yomoya.
Edlulileyo: Isihluzi seMesh
Okulandelayo: Iintsimbi zokuGqibela
Ubunjineli beNdawo eYilwayo
I-anti-Slip Inokuqiniswa kweMetali yeMesh
© Copyright - 2010-2020: Onke amalungelo agciniwe. Iimveliso ezishushu, Imephu